Enoxolo Vista Townhouse
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguRod And Theresa
Ikhaya elihle lale dolophu kumbindi woMlambo iHood elineembono ezintle zoMlambo iColumbia kunye neNtaba iAdams.
Indlu yedolophu eyakhiwe ngokwesiqhelo kuMlambo iHood embindini weColumbia River Gorge. Lonwabele ikhaya lethu elihle leholide elinomgangatho womthi oqinileyo, iisilingi ezivalekileyo, ii-accents zethayile, iifestile ezinkulu zokujonga, kunye nokukhanya okuninzi! Ifakwe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kwaye kukuhamba imizuzu elishumi kuphela ukusuka kumbindi wesixeko saseHood River kunye nemibono yomlambo kunye nentaba. Ikhitshi eligcweleyo, iDinning, kunye negumbi lokuhlala, amagumbi amabini okulala, iibhafu ezi-2.5, iWasher / iDryer, igaraji ebanzi kunye nomgangatho. Kukho ibhedi yesofa yokumkanikazi kwindawo yokuhlala.
Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokutyelela iColumbia River Gorge okanye iMt Hood. Sikwindawo yokuhlala ezolileyo, kodwa kulula ukuhamba umgama ukuya edolophini yeHood River. Siyimizuzu nje emi-5 ukusuka kuzo zonke iindawo zohola bendlela. Sinombono omhle womlambo. Abathandi bemidlalo yomoya banokumisela iimeko ngokujonga ngaphandle kwefestile!
Umbuki zindwendwe ngu- Rod And Theresa
Sigcina indlu encinci emva kwegaraji kunye nesango elihlukeneyo. Sisenokuba okanye singabikho kule ndlu xa undwendwela, kodwa sinokulungiselela nantoni na oyifunayo ngomnxeba. Asinakuze singenelele kwimfihlo yakho ngaphandle kokufowuna kuqala.
Sigcina indlu encinci emva kwegaraji kunye nesango elihlukeneyo. Sisenokuba okanye singabikho kule ndlu xa undwendwela, kodwa sinokulungiselela nantoni na oyifunayo ngomnxeba. Asin…
URod And Theresa yi-Superhost